विकिलिक्समा भारतले अमेरिकालाई नेपालको कुरा लगाउदैं – NEPÆNGLISH
हिजो डिसेम्बर १० तारिख शनिवार विकिलिक्सले नेपालको नाम जोडिएको अर्को एउटा गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ । दिल्लीस्थित अमेरिकी दुतावासको एक गोप्य दस्तावेजअनुसार नेपालको भूमी हुँदै कम्तिमा १६ जना आतंककारीहरू पाकिस्तानबाट भारत पसेको जनाइएको छ । त्यहिँबाट तिनीहरू कास्मिर गएको भारतका तत्कालिन सेनाप्रमुख दिपक कपूरले अमेरिकी सुरक्षा सल्लाहकार जेम्स जोन्ससँगको २६ जुन २००९ मा नयाँ दिल्लीमा भएको भेटमा भनेका रहेछन् । उक्त भेटमा भारतिय रक्षा मन्त्री ए।के। एन्थोनी पनि सँगै थिए । सो भेटमा जोन्सले भारतमा कतिसम्मको आतंककारीहरूको घुसपैठ हुन्छ भनेर सोधेको प्रश्नको जवाफमा सेनापति कपूरले अनुमानित १५ देखि २० प्रतिशत घुसपैठ हुन्छ भनेका थिए । छिमेकी देश नेपालसँग खुल्ला सिमाना भएकोले भारतिय सुरक्षामा अझ चुनौती थपिएको छ भनेर भने । यसबाट के स्पष्ट हुन जान्छ भने, भारत किन नेपालको राजनीतिमा यतिबिध्न हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न चाहन्छ । अनि यो कुराको सप्रमाण यो दस्तावेज रहेको छ । कपूरको यो दावीसहितको दस्तावेज दिल्लीस्थित अमेरिकी दुतावासले २९ जुन २००९ मा तयार परेका थिए ।
यदि कपूरको यो भनाइ साँचो हो भने, के भारतले नेपाल सरकार र सरकारी सुरक्षा अंगहरूसँग यस कुराको बारेमा कुनै समन्वय गरेको थियो ? कुनै सूचना आदान्-प्रदान भएको थियो ? यदि होईन भने, नेपाललाई यसरी अनेकथरी आरोप लगाउने पुरानो बानीलाई भारतले सुधार्नु पर्छ । नेपाल एउटा सार्वभौमिक राष्ट्र हो भन्ने कुराको उसलाइ हेक्का हुनुपर्दछ । साथै, नेपालको भूमी यसरी घुसपैठकै निम्ति प्रयोग भएकै हो भने पनि उसले मित्रवत तरिकाले नेपाल सरकारसँग यसको बारेमा राष्ट्रिय सरकारस्तरमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो । दुई छिमिकी देशमा सुरक्षाको समन्वयकारी संयन्त्र बनाइ उसले नेपालबाट सहयोग प्राप्त गर्न सक्थ्यो । तर, उनीहरू त्यसको ठीक उल्टो गर्न प्रयत्नरत छ । नेपालमा जति उसको हस्तक्षेपकारी भूमिका बढ्छ, देश् त्यति नै राजनैतिक अस्थिरता बढ्छ र बढेको छ । अनि यस्तो वातावरणमा उसले छिमेकी देशबाट उसको सिमामा हुन सक्ने घुसपैठ पनि नहोस् भनेर आशा पनि गर्छ । यो त आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ । त्यसैले भारतले हाम्रो बारेमा कसैलाई कुरा लगाउनु अघि एक पटक उसले आफ्नै दोधारे भूमिकाकै बारेमा एक पटक बिचार गर्ने पो हो की ?
Satya Maharjan December 11, 2010
Previous Previous post: "विषाक्त चक्की"
Next Next post: Pokauda and Flashback